Harry Potter filma no nahomby indrindra sarimihetsika maromaro fotoana rehetra. Maro ny sehatra avy amin'ny Harry Potter filma no voatifitra ao London mihitsy. Na mpankafy maty ilay sarimihetsika Harry Potter na andiana boky ianao, London no isalasalana fa ny toerana tsara indrindra mba hitsidika ho marina Harry Potter traikefa. Te-hahafantatra izay 5 Places mba hitsidika Harry Potter ho an'ny Weekend in London? Save A Train no nanangona lisitra io mba hahatonga ny wizarding traikefa nahafinaritra iray mora kokoa mahaliana iray!
Izany no traikefa indrindra ao amin'ny boky! Jereo ny tanana voalohany ny milentika, akanjo, sy ny fitaovana rehetra ampiasaina amin'ny Harry Potter ny sarimihetsika! Dingana ao anatin'ny sasany amin'ireo toerana ao amin'ny horonan-tsary ao anatin'izany; The Great Hall, Birao Dumbledore, ary Hagrid hut.
Aiza no misy izany? doha amin'ny eo an-Warner Bros. Studios Tour London. Ny fanaovana Harry Potter dia mahasarika-bahoaka tany atsimoatsinanan'i Angletera Leavesden in. Tsy tokony hafangaro amin'ny World Wizarding of Harry Potter an'ny Universal Studios vala zaridaina. Izany dia maharitra fanatitra fampirantiana ny marina ambadiky ny sehatra hahafantatra momba ny Harry Potter sarimihetsika. Manana andro mahagaga avy amin'ny ambadiky ny sehatra fitsidihana ny Harry Potter amin'ny Warner horonantsary Bros. Studio Tour London.
Ao anatin'ny Kings Cross Station, ny lehibe fiantsonan'ny fiaran-dalamby tany Londres ny fiaran-dalamby ho any Edinburgh sy Ekosy, ny mpizaha tany attraction Efa napetraka, miaraka amin'ny entana Trolley antsasany nandinika lalina ny rindrina, toerana ahafahanao mahazo miaro indray ny Harry Potter ny fotoana.
Anelanelan'ny ora an'ny 9 am ary 9 PM dia afaka mandoa ny hanana mpaka sary matihanina sy ny mpanampy manampy anao hahazo ny tsara indrindra azo atao sary, feno miaraka amin'ny scarf Harry Potter sy / na wand. Mbola Afaka maka sary anao manokana eto maimaim-poana.
Raha toa ianao ihany no afaka mitsidika mandritra ny fotoana fara tampony, ary manam-bola ho nanam, Azonao atao ny mieritreritra ny hividy lanyard VIP Photo Pass. Tafiditra amin'izany ny sehatra 9 ¾ lanyard, ny sarinao, ary mitsambikimbikina filaharana, rehetra for £ 20.
Inona no atao hoe Harry Potter Weekend in London tsy nanandrana ny vilany? Io herin'ny maizina Cocktail Experience dia 1 hr 45 min immersive kilasy in London. DON ny akanjo, raiso ny tananao, ary miomàna ho an'ny kilasy Potions be zotom-po indrindra, izany Immersive ody Cocktail traikefa nandritra ny roa amin'ny The vilany, London.
Ao amin'ny toeram-piasanao, dia hahazo ny mamantatra ny ody wand amin'ny nandraraka zava-pisotro ho tonga soa. Ho avy eo mampiasa molekiolan'ny manokana mixology fahaiza-manao mba labiera ny matsiro elixirs, tsirairay avy izay ho hafa toetra sy ny vokatry. Get vonona ny afangaro ny sasany amin'ny London majika indrindra molotov ny hilaza traikefa!
-Maimaim-poana ny toaka, glotena, ary ny safidy vegan dia misy daholo
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “5 Places mba hitsidika ho an 'ny Harry Potter Weekend In London” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fharry-potter-weekend-london%2F%3Flang%3Dmg– (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)